‘पैसाको साटो सुन पठाउने प्रवृत्ति बढ्यो’ - BBC News नेपाली
‘पैसाको साटो सुन पठाउने प्रवृत्ति बढ्यो’
Image caption लाखौं नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रकमले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको बताइन्छ
विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुले पैसाको साटो सुन पठाउने क्रम पछिल्ला केही महिनाहरुमा एक्कासी बढेपछि देशको अर्थतन्त्रको मूल खम्बा बनेको विप्रेषण वा रेमिटेन्सको आम्दानी घटेको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
त्यसरी पठाएको सुनका कारण देशभित्रका बैंकहरुमा मौज्दात रहेका सुनको बिक्री समेत हुन छाडेको बताइन्छ।
विप्रेषण घटनाले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको नाफा तीव्र गतिले ह्रास हुन थालेको देखिएको छ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधि ताका विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्स रकम मासिक रुपमा झण्डै चालिस प्रतिशत बढ्ने गरेको थियो।
तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यसपालि भने रेमिटेन्स भित्रिने दर बढ्नुको त कुरै छाडिदिउँ, ०. ६ प्रतिशतले घटेको छ।
यसरी एक्कासी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा कसरी चोट लाग्यो त?
प्रारम्भिक परीक्षणबाट बैंक वा रेमिटेन्स कम्पनीको साटो अनधिकृत रुपले हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने प्रवृत्ति बढेको अनि पैसाको साटो सुन पठाउनेको संख्या बढेको राष्ट्र बैंकले पाएको छ।
“हामीले बुझ्दै जाँदा के देख्यौं भने अचेल बाहिर बसेका व्यक्तिहरुले पैसा पठाउने भन्दा पनि सुनै ल्याउने वा अन्य व्यक्तिमार्फत सुन नै पठाउने गरेका छन्,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बताए।
यसको सोझो असर विप्रेषणको आप्रवाहमा मात्रै होइन बैंकहरुमा मौज्दात रहेको सुनमापनि परेको छ।
यसै कारण अचेल बैंकका सुन बिक्री हुन गाह्रो परेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
“बैंकहरुमा रहेका सुनको बिक्री खासै हुन सकिरहेको छैन। बाहिर गएका व्यक्तिहरुले सुनै ल्याउने र त्यो बिक्री गर्ने गरेपछि बैंकको सुन बिक्री भएको छैन। त्यसरी सुन ल्याएका कारण अर्कोतिर रेमिटेन्सपनि बढ्न सकेको छैन,” उनको भनाइ थियो।
हामीले बुझ्दै जाँदा के देख्यौं भने अचेल बाहिर बसेका व्यक्तिहरुले पैसा पठाउने भन्दा पनि सुनै ल्याउने वा अन्य व्यक्तिमार्फत सुन नै पठाउने गरेका छन्
मनमोहनकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
केही समय यता यसै विषयलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल हुन थालेको छ।
तस्करीको सुन व्यापकरुपमा देश भित्रिन थालेको भन्दै समितिले यस बारे सबै सम्बन्धित निकायसंग कुराकानी गरिरहेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बताए।
“बैंकमा अहिले ४ सय किलो सुन बिक्री नभएर थन्किएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यसको अर्थ के हो भने वैधानिक ढंगले आउने सुन बिक्री नभएर केही सस्तो पर्ने यस्ता तस्करीका सुन बिक्रीहुन थालेका छन्। यसरी सुन आउँदा वैदेशिक मुद्राको आगमनपनि घाटामा गएको छ,” शर्माले भने।
पाँच वर्ष अघिपनि सुनकै अनधिकृत आयातका कारण नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नराम्ररी खलबलिएको थियो।
त्यतिखेर सरकारले सुन आयातमा कडाइ गर्नुका साथै सुनमा लाग्ने भन्सार समेत बढाउन अध्यादेश ल्याएको थियो।
देशले निर्यात, पर्यटन र रेमिटेन्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा र आयातको लागि तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राबीचको फरक अर्थात भुक्तानी सन्तुलन गत वर्ष यही अवधिमा ५२ अर्ब रुपियाँले नाफामा थियो भने अहिले चाहिं त्यो आँकडा केवल ३ अर्ब रुपियाँमा ओर्लिएको छ।